Nepal - जारी छ, भ्रष्टाचारको आन्दोलन
जारी छ, भ्रष्टाचारको आन्दोलन
सरोकारवाला शक्तिकेन्द्रहरुमा ‘कुत’ बुझाउन सक्ने र त्यसका लागि ‘भ्रष्टाचारको बाली’ उमार्न सक्ने, यही हो योग्यता– घपलाविद् गोपाल खड्काको । ‘प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार’ गर्न सक्ने योग्यता हो उनको । तर, कहाँ के मिलेन, आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट पदच्यूत गरिए । त्यसअघि नै नेपालले ११ भदौको अंकमा ‘काण्डकारी निर्देशक’ शीर्षकको आवरण कथामा उनका कर्तुतबारे विस्तारमा लेखेको थियो ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता अनि बेथितिका समाचार बढी देखिन्छन्, अचेल सञ्चारमाध्यममा । ‘कसले उठाउँछ गृहमन्त्रीको पैसा’देखि ‘चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्न एक करोड रूपियाँ तोकिएको’जस्ता समाचारमा अब कुनै नयाँपन रहेन । पैसाको छेलोखेलो अथाह हुने पदहरु बिक्री गरिएका सूचना पनि अब समाचार रहेनन् । यस्ता पद कसैले सित्तैँमा पाएछ भने सञ्चारमाध्यमले कुनै दिन समाचार बनाउला बरु ।
राज्यको सम्पत्ति सोहर्न मिल्ने पद बेचिएका छन्, किनिएका छन् । तर, कुरा के भने नि हजुर ! पद खरिदकर्ता मात्र ‘भ्रष्टाचारी’ हुने । ऊ नै सञ्चारमाध्यमको तारो बन्ने । तर, त्यही पद बिक्रीकर्ता पानीमाथिको ओभानो हुने ? एक हातले ताली बज्छ र ? यो प्रवृत्ति रहेसम्म अर्को गोपाल खड्का समाजमा खडा भई नै रहन्छन् । कसैले पद बिक्री पसल खोल्छ भने त्यहाँ ग्राहकको के कमी ! हो, यहीँनिर हामीकहाँ दलालको बिगबिगी छ, नवधनाढ्य बन्ने चाहनामा ।
चलनचल्तीको भाषामा खड्का शिक्षित हुन् । भारतको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाबाट इन्जिनियरिङ गरेका छन् । राम्रै इन्जिनियर पनि हुन् । तर, शिक्षाको होइन, अथाह कमाउने माद चढ्यो । अनि, उनले बाटो मोडे । विगत दुई दशकमा जोजो ‘भ्रष्टाचारी’ ठहरिए वा भनिए , उनीहरु प्राय:को शैक्षिक पृष्ठभूमि राम्रै छ । यसैले भन्न करै लाग्छ, शिक्षा केवल योग्यताको कसी होइन रहेछ, मानसिक अवस्थाको मानक पनि रहेछ ।
जहाँ सहरीकरणको कृत्रिम उभारमा देखासिकी शैलीको उपभोक्तावादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ, त्यहाँ लोकमान सिंह कार्कीदेखि गोपाल खड्काजस्ता पात्र देखापर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यस्तो प्रवृत्ति जहाँ बलशाली हुन्छ, त्यहाँ यस्तै पात्रहरु जन्मिने हुन् । हामी मात्र अपवाद होइनाँै । नेपाली समाजको मनोदशा के भने यस्ता पात्रले पदमा रहुन्जेल कथित सामाजिक प्रतिष्ठा पाइरहन्छन् । समाजको एउटा तप्का भ्रष्टाचार गर्नसक्ने यस्ता ‘बहादुरहरु’को जयगान गर्दा आफ्नो पनि सम्पत्ति र प्रतिष्ठा केही बढ्छ कि भन्ने आशमा र्‍याल चुहाइरहेकै हुन्छन् ।
खड्का बर्खास्त भए । अब आयल निगमको कार्यकारी पद किनेर अर्को कुनै गोपाल आउँछ । उसले आफ्नो लगानी उठाउँछ । समाजको त्यही तप्का उसकै पछि ‘झर्ला र खाउँला’को शैलीमा फेरि दौडिन्छ । यसैले जनआन्दोलनको उभारबाट उठेका तर अहिले होलसेल मूल्यमा पद विक्रेताका रुपमा रुपान्तरित नेताहरुलाई सोध्न मन लाग्छ, ‘नेताज्यू ! भ्रष्टाचारको आन्दोलन कहिलेसम्म जारी राख्ने हो ?’